Al Shabaab oo si adag uga hadashay Xil ka qaadistii Ra’isul Wasaare Kheyre | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Al Shabaab oo si adag uga hadashay Xil ka qaadistii Ra’isul Wasaare...
Afhayeenka Al-Shabaab Cali Maxamuud Raage (Cali Dheere) ayaa ka hadlay isbadalka ku yimid Xukuumaddii Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre oo Kalsoonida ka weysay Golaha Shacabka BFS bilawgii todobaadkii hore.
Waxa uu sheegay in Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Xasan Cali Khayre ay sheegi jireen in daacad u yihiin u adeegista dalkooda, kana shaqeynayaan horumarkiisa, balse kala taggooda uu meesha ka saaray waxa ay sheegayeen.
Afhayeenka Al-Shabaab Cali Dheere ayaa tilmaamay in kala qaybsanaanta Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaarihii hore Xasan Cali Khayre ay meesha ka saartay himilooyinkii ay ku taahmayeen.
Go’aanka Golaha Shacabka kalsoonida ay kala laabteen Xasan Cali Khayre Ra’iisul Wasaarihii hore ee dalka waxa uu Afhayeenka Al-Shabaab ku tilmaamay mid waji cusub u yeeleysa Siyaasadda Dowladda Federaalka.
Madaxweynaha DFS Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku howlan magacaabista Ra’iisul Wasaaraha Cusub ee Dalka, waxyaabaha horyaalla shaqsiga xilkaas qabanaya waxaa ugu weyn qabashada Doorashada oo waqti xileedka Dowladda uu haatan sii idlaanayo
Previous articleQoor Qoor oo Gudiga ka baaran dagay Xiliga Doorashada magacaabay
Next articleAl Shabaab strongly condemns the removal of Prime Minister Kheyre
Madaxweyne Farmaajo oo ka meer meersanaayo in uu meel mariyo Mataalada...